Cabdi Illay oo ka hadlay nolasha xabsiga iyo sida loola dhaqmey
ADDIS ABABA - Madaxwaynihii hore ee dowlad degaanka Soomaalida ee ka tirsan Federaalka Itoobiya, Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ka warbixiyay nolasha xabsiga iyo sida ay ula dhaqmeen ciidamada Booliska ee soo xiray.
Cabdi Illay ayaa xorriyadda laga qaaday bishii Agoosto ee sanadkaan 2018, isaga oo ku eedaysan inuu geystay tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, isaga oo dhowr jeer kasoo hor-muuqday maxkamad.
“Waxaan ku xiran nahay dalkeYGA…Waxaan dareemaynaa wanaag…Ma jiraan wax dhibaato ah…Waanu wanaagsan nahay,” ayuu yiri Cumar oo wareysi ku dhex-siiyay xabsiga warbaahinta ku hadasha afka dowladda Itoobiya.
Hadalka Cabdi Illay ayaa kusoo aadaya xili xubno ka tirsan qoyskiisa ay horey dhawaajiyeen in lagu jirdilo xabsiga, inkasta oo uusan haatan soo hadal-qaadin, mana aysan ka muuqan qaybaha sare ee jirkiisa.
Balse, qaar kale oo ka tirsan maxaabiista xabsiga kula jirta Madaxwaynihii hore ee degaanka Soomaalida Itoobiya ayaa saluugay qaabka maxkamada loo horgeeyo eedaysanayaasha iyaga oo sheegaya in laga dib mariyo waqtigeeda.
Madaxwaynaha Maxkamadda sarre ee Itoobiya marmot Meaza Ashenafi oo booqatay xasbiga ay ku jiraan maxaabiistaan ayaa sheegtay inay wax ka qaban doonan cabashooyinka ay dhageystEEn.
Xabsiyadda waawayn ee Itoobiya ayaa waxaa ka jiray dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeysay inay ku jiraan dad u xiran arrimo siyaasadeed, xili maamulka Abiy Axmed uu balanqaaday inuu la tacaali doono arrintaasi iyo kuwa kale.
Ra'isal wasaare Abiy Axmed oo Addis Ababa kula kulmay Dadka Soomaalida ah [Sawiro]
Afrika 24.08.2018. 12:57
Kulankaan ayaa waxaa uu ka dhacey Hall-ka loo yaqaan Millennium oo ah halka madaxda....
Taliyahii ciidanka Liyuu Boolis oo shaqadda laga eryay
Afrika 28.08.2018. 20:32
Yaa gadaal ka riixaya Shirqoolka lagu afgembinayo Mustafe Cagjar?
Afrika 25.01.2019. 02:13
Taliyahii Booliska dowlad degaanka Soomaalida oo la xiray
Afrika 30.08.2018. 22:00
Madaxwaynaha cusub ee DDSI oo qodobo muhiim ah ka hadlay
Afrika 07.08.2018. 00:57
Mustafe Cumar oo soo magacaabay qaar ka mid ah taliyeyaasha laamaha amniga
Afrika 29.08.2018. 01:21
Maxaa keenay in Musfata uu noqdo Madaxwaynaha DDSI?
Soomaliya 23.08.2018. 09:29
Mustafa oo si kulul uga hadlay rabshado ka dhacay Jigjiga
Soomaliya 25.09.2018. 10:44
Soomaaliya iyo Cuba oo dib boorka uga jafaya xiriirka diblumaasiyadeed 21.06.2019. 01:28
Xukuumadda Soomaaliya oo u hanjabtey Siyaasiyiin 20.06.2019. 23:23
Deni oo guddi u saarey xaaladda degmo ay baddu kusoo fatahdey 20.06.2019. 17:55
Soomaaliya oo si rasmi ah ugu biirtay dalalka saxiixay cahdi caalami ah 20.06.2019. 17:15
"Galmudug ma ahan mustacmarad, waa maamul madax banaan" 20.06.2019. 15:56
Jenaraalo loo xiray inqilaabkii Turkiga oo 141-sano oo xabsi lagu xukumay 20.06.2019. 13:56